स्टिभ जब्सका सफल बन्ने चर्चित सुझावहरू – आफ्नो प्रेरक संसार
स्टिभ जब्सका सफल बन्ने चर्चित सुझावहरू
Bibas chetan — १४ भाद्र २०७६, शनिबार ११:५१0comment
२. अरुको राय आफुमाथि हावी हुन नदिनुहोस्
दोस्रोको बिचारलाई हामीमाथि त्यती धेरै हावी हुन नदिनुहोस् कि आफ्नो भित्री आवाज सुन्न नसकियोस । सधै आफ्नो दिल र दिमागले चल्नुहोस् ।
६. राम्रो काम गर्नुहोस र अघि बढ्नुहोस्
यदि तपाई कुनै राम्रो काम गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको नतिजा पनि राम्रो हुनुपर्छ । त्यसेलै यसका लागि तपाईले केहि नयाँ सोच्नुपर्छ । तपाई कहिलेसम्म एकैखाले काम गरिरहनुहुन्छ ? सोच्नुहोस् अव तपाइको लागि अलग काम के छ ?
जब कुनै समस्या आउनसाथ मानिसहरु सोध्छन् कि, यो के भयो ? जबकी सहासी युवा सोध्छन् कि यससँग हामीले कसरी जुध्न सक्छौ ?
१२. त्यही काम गर्नुहोस् जहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ
तपाईको कामले जिन्दगीलाई सन्तुष्ट तुल्याउनु हो । र, सन्तुष्ट प्राप्त गर्नका लागि त्यही गर्नुहोस्, जसमा तपाई विश्वस्त हुनुहुन्छ । महान काम गर्नेको एकै तरिका छ, तपाई जे गर्नुहुन्छ, त्यसलाई प्रेम गर्नुहोस् ।
कोहि मर्न चाहँदैनन् । त्यो व्यक्ति जो स्वर्ग जान चाहन्छन्, ऊ पनि मर्न चाहँदैन । तर, मृत्युले कसैलाई बचाउँदैन । मृत्यु जीन्दगीको श्रेष्ठ आविष्कार हो । यो जीवन परिवर्तन गर्ने माध्याम हो, जसले पुरानो मेटाएर नयाँ देखाइदिन्छ ।
afno news Apple stives jobs आफ्नो न्युज प्रेरक भनाइ महान भनाइ राम्रा भनाइ विवश कुलुङ सफलता स्टिभ जब्स
बिहानै हिम्मत दिने केही भनाइहरू
सफलतका लागि आजै त्याग्नुस् यी ५ कुराहरू